ट्राफिक विद्रोहले गर्यो राम्रै काम, हट्यो VIP जाम, राष्ट्रपति अमेरिका जाँदा जे देखियो...(भिडियो), Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
ट्राफिक विद्रोहले गर्यो राम्रै काम, हट्यो VIP जाम, राष्ट्रपति अमेरिका जाँदा जे देखियो...(भिडियो)
काठमाडौं। नागरिक दबाबले सत्ता र शक्तिमा रहेका व्यक्तिमाथि असर छाड्छ भन्ने ताजा उदाहरण मिलेको छ। नागरिकको चाहाना र भावनालाई बुझेर अगाडि बढ्दा सत्ता र शासकले स्याबासी पनि पाउँछन् नै।
हो, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी अमेरिका भ्रमणमा जाँदा हिजो साँझको सवारीमा नागरिकले सास्ती भोग्नु परेन। पहिलो पटक नै होला, यसरी सवारी हुँदा सडक दुईतर्फी बन्द गरिएन, एकतर्फी मात्रै गरियो। त्यो पनि मात्रै १५ मिनेटका लागि।
यस अगाडि उनै राष्ट्रपतिको सवारीका कारण पौने घण्टासम्म बाटो रेकिएपछि सडकमा विद्रोह भएको भिडियो भाइरल भएको थियो। त्यसले चर्को दवाव सवारी व्यवस्थापनमा परेको थियो।
नागरिक दबाबले बेलाबेलामा राम्रै काम गर्छ भन्ने उदाहरण हिजो आइतबार रातिको राष्ट्रपति सवारीमा देखियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी संयुक्त राष्ट्र संघले आयोजना गरेको महिलाहरुको अवस्थासम्बन्धी आयोग को ६३औं अधिवेशनमा भाग लिन अमेरिका जाँदा सडकमा 'सवारी जाम'को सास्ती निकै कम भयो।
राष्ट्र प्रमुख यसरी सवारी हुँदा यस अगाडि सधैँ दुईतर्फी सडक खाली गरिन्थ्यो, तर नागरिकले गरेको ट्राफिक विद्रोहको ताजा असरले नै होला हिजोको राष्ट्रपति सवारी सचेष्ट कम पीडादायी पारियो।
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको फेसबुकमा सवारी सम्बन्धी सूचनाले पनि पुष्टि गर्छ की यो पटक निकै कम समय सडकमा अवरोध भयो त्यो पनि एकतर्फ मात्रै।
ट्राफिक सूचना अनुसार साँझ ७ बजेर ५ मिनेटमा शीतल निवासबाट एयरपोर्टसम्मको बाटो एकतर्फी रोकिएको थियो। १५ मिनेटमै बाटो खुलेको उही सूचनामा उल्लेख छ। अर्थात ७ बजेर २० मिनेटमा बाटो खुलेको थियो।
सडकमा यस अगाडि जस्तो यात्रुहरूले सास्ती पाउनु पनि परेन, ट्राफिकलाई अटेर गरेर सवारी कुँदाउने विद्रोह पनि भएन।
अर्को चाखलाग्दो कुरा के छ भने यो पटकको भ्रमणमा राष्ट्रपति भण्डारीको पहिरन पनि फेरिएको छ। अघिपछि भन्दा पहिरनमा फेरिएको अथवा भनौँ थपिएको पोशाक हो ओभरकोट।